Cishe uyazibuza uma $27 ayichitha iSofthiwe ethi Imfihlo kusuke kukufanelekele utshalomali.
Awu, kukhona izindaba ezinhle uma ungazizwa like kokuchitha imali, ungathola izimfihlo isofthiwe ncwadi thwebula ngokuvakashela iwebhusayithi Russell Brunson sika.
Njengoba uthi ngokucacile umnikelo Ngokuyinhloko lencwadi sika ukukubonisa indlela ukudala uphinde uthengise ngelakho egcizelele zokusebenza isofthiwe lwezikhathi sezinsuku ezingu-90 noma ngabe awunayo umqondo owodwa lokuthi aphathwa kanjani ikhodi noma ukuqala.
Iphinde ufundisa indlela ukusebenzisa lezi amasu ukusiza i ibhizinisi ekhona ngokungeza engenayo yansukuzonke nokubaluleka beqonda ukuthi amakhasimende amasha.
Ungathola ukufinyelela lolu lwazi by ngokuvakashela lesi sixhumanisi.
Ukuba ukufinyelela noma izimfihlo isofthiwe – izimfihlo isofthiwe eBook limelela nje utshalomali elincane yezimanga ukukusiza ukwenza isinqumo esingcono kakhulu ekuphileni kwakho noma umane ziqhubeka wazi elinye ithuba ukuwina imali ukwenza okuthile okuhlukile ngokuphelele ukuphila kwakho.
Noma kunjalo, kungcono nongenza ngawe.
Incwadi esebenza khona njengomqondisi wesikhumulo sipho okwethula ukuhlanganisa indaba eningi didactic nolwazi lobuchwepheshe ukuthi kungenziwa abeke ukusebenzisa ukuthuthukisa isofthiwe usebenzisa amathuluzi Clickfunnels.
Ngisho noma ungenayo umqondo wokobana inomboro ukubhekana esephepheni futhi ibhizinisi sewebhu, uzokwazi ukwenza imali phandle kwalesi inqobo nje uma unentshisekelo yokufunda ngakho.
Filed Under: Software secrets Tagged With: softwaresecrets - izimfihlo isofthiwe eBook
Uma uyazibuza kanjani ashukumisayo kungcono esigcawini clickfunnels ithempulethi, udinga kuphela ukwenza usesho lwewebhu uzoba kweso ukuthola ukuthi iphetheni izinketho isifanekiso efanayo okunikelwe abasebenzisi yonke indawo esekelwe izinga labo impumelelo.
Akukona nje kuphela ukuthi!
Eziningi zalezi ababuyekezi uzohamba isinyathelo xaxa ukuze uqiniseke ukuthi ukhethe isifanekiso kangcono ibhizinisi lakho okusekelwe yakho umnikelo yomkhiqizo.
Kusukela iningi lalezi izifanekiso woza ukupakisha eziningi ngokwezifiso izici, ungahlala ukuwenza uphumelele kungakhathaliseki engela kwezamabhizinisi yakho.
Uzokwazi ukuxhuma abasebenzisi nge amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi noma ukunikela CCS phuma amamenyu, ukwabelana amawijethi nemibukiso ashukumisayo kokuqukethwe kwakho.
Uma uyazibuza ukuthi yiliphi okungcono yokukhokha esangweni clickfunnels, isayithi linikeza izimpendulo lula ukusebenza inqubo ukuhlanganiswa okungenani 15 we izindlela zokukhokha ethandwa kakhulu esetshenziswa inthanethi.
Ungaya izindlela esithandwayo esisetshenziselwa Apple futhi pay-Android atholakala kalula ekhasini eliyinhloko futhi atholakale isetshenziswe ekuhlanganisweni ne Umugqa.
Authorize.net lungasetshenziswa, kodwa uzodinga VAR ishidi.
Braintree lungasetshenziswa. Udinga nje ukhiye wangasese mayelana nokuhlanganiswa.
Chofoza yasebhange iyatholakala, kodwa uzoba zidinga eziningana zangekhulu yasebhange ukuze usethe esangweni yokukhokha ezifana Chofoza yasebhange ukhiye we-API, the Clerck ukhiye we-API, nobunikazi umthengisi.
Amasayithi efana Dealguardian, Easypaydirect, ukumnika ezithambile, JV, Ontraport, Recurly, PayPal, futhi WarriorPlus babe langokwezifiso isethaphu inqubo yabo, kodwa asebenza kahle ngohlelo.